Global Voices teny Malagasy » Sina: Voatohitohina Ilay Rindrinafo Goavana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Avrily 2019 17:07 GMT 1	 · Mpanoratra John Kennedy Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Naka nanaraka azy ilay filàna hanivan-tena mba hahatafavoahana velona ny fahataperan'ny Rivopanovàna Ara-kolontsaina tao Sina  telopolo taona lasa izay. Raha toa ka efa afaka miresaka malalaka tsara ireo Sinoa —zo iray arovan'ny lalàmpanorenana Sinoa—  mbola misy foana ireo andiam-pitsipika sy fenitra tsy voasoratra hamaritana ny fotoana sy ny tranga mahatafiditra ny mpanatrika.
Toa vahaolana ny fanaovana “podcasts”, fara-faharatsiny aloha mandra-pahatraran'ny teknolojia fanaraha-maso ny feo ny zava-baovao – hevitra iray tsy very ao amin'ny Bilaogy Demokratikan'i Sina, “Neo”, ny bilaoginy MSN Spaces mitondra io anarana io ihany  izay voasakana tao amin'ny tanibe vao haingana izay.
Ny voalohany, tatitra iray [vohikala maty] mikasika ny solontenan'ny Fivoriana Fakàn-kevitra Ara-politika Amin'ny Vahoaka Sinoa, Zhang Xianliang, sy ny tolokeviny amin'ny fanamboarana tranombakoka momba ny Rivopanovàna Ara-kolontsaina  [pejy voafafa].
Manarak'izay, mamoaka andianà rakipeo efatra  [vohikala maty] an'i Ming Ju-zheng (明居正), Zokiolona ao amin'ny departemantan'ny siansa politika ao amin'ny Anjerimanontolom-pirenen'i Taiwan, miresaka mikasika ilay Rivopanovàna Ara-kolontsaina, ny Neo.
Boky fahatelo: Mijery ny momba ireo andraikitr'i Lin Biao , ny Tariky ny Efatra  sy ireo Mpiambina Mena tanatin'ilay Rivopanovàna Ara-kolontsaina io boky io ary mandroso fomba fijery hafa amin'ny an'ny Antoko Kaominista Sinoa.
Hatramin'ny oviana no hijanona ho safidy maharitra amin'ny fanembatsembanana ny sivana anaty Aterineto ireo podcasts? Ndeha hanantena fa ho lava nóho ny fotoana ilain'ny Cisco  mba handehanana mankany amin'ny banky.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/22/136859/
 Rivopanovàna Ara-kolontsaina tao Sina: http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Revolution
 lalàmpanorenana Sinoa—: http://english.people.com.cn/constitution/constitution.html
 bilaoginy MSN Spaces mitondra io anarana io ihany: http://spaces.msn.com/freedom-democracy/
 Ny voalohany, tatitra iray : http://democn.5000megs.com/2006/04/blog-post_04.html
 ny Rivopanovàna Ara-kolontsaina: http://www.howardwfrench.com/archives/2005/05/29/scenes_from_a_nightmare_a_shrine_to_the_maoist_chaos/
 andianà rakipeo efatra: http://democn.5000megs.com/2006/04/blog-post_07.html
 ny Tariky ny Efatra: http://en.wikipedia.org/wiki/Gang_of_Four_(China)
 Mpiambina Mena : http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Guards